China Tungsten Carbide Nozzles Nrụpụta na Factory | N & D Na-eme Ihe
The tungsten carbide nozzles ga-eji tumadi ka PDC malite ịgba ibe n'ibe na cone ala ibe n'ibe maka flushing, jụrụ na lubricating akuakuzinwo bit Atụmatụ na ihicha nkume ibe ke ọma ala na mkpọpu ala mmiri na-arụ ọrụ ọnọdụ nke elu nsogbu, vibration, ájá na slurry impacting n'oge olile anya nke mmanụ na gas.
Tungsten carbide sandblasting nozzles na-arụpụtara si na-ekpo ọkụ na ịpị na ogologo mụụrụ na venturi bore type. N'ihi na ya ekweghị ekwe, ala njupụta na magburu onwe wear na mgbochi corrosion, Tungsten carbide sandblasting nozulu e n'ọtụtụ ebe na sandblasting na shot peening akụrụngwa, àjà a ogologo ndụ na kacha ikuku na abrasive ojiji.
Tungsten carbide ịgba nozulu mmanụ ubi nwere a dịgasị iche iche nke nkọwa, esichara na mere na elu àgwà akụrụngwa. O nwere njirimara nke nguzogide okpomoku di elu, iguzogide corrosion, mgbochi abrasion, nkenke di nkpa na ihe ndi ozo.
Tungsten carbide nozulu mmanụ ubi malite ịgba bit akụkụ dị na ndị a ekwekọghị na nha:
piom okooko osisi ụdị eri nozzles
esịtidem hexagonal eri nozzles
ná mpụga hexagonal eri nozzles
cross uzo eri nozzles
Y ụdị (atọ grooves) eri nozzles
gia wheel malite ịgba bit nozzles na pịa agbaji nozzles.
Maka ihe dị iche iche ndị ahịa anyị chọrọ, anyị na-arụ ọrụ n'ichepụta, na-eweta, na-ebupụ ma na-azụ ahịa dị iche iche nke Tungsten Carbide Nozzles. Ngwaahịa ndị a bụ ihe jupụtara na steeti ma hụ na ndụ dị ogologo. Ngwaahịa ndị a niile dị mfe iji wụnye ma chọọ nlekọta dị ala. Ngwaahịa ndị a dị na nha na nkọwa dị iche iche.
Ọkwa Nka na ụzụ
Ngwaahịa ndị ahụ nwere ezigbo ejiji na nguzogide mmetụta. Enwere ike iji eri ahụ mee ka ọ bụrụ nke siri ike ma ọ bụ jiri brazing na ịtọ ntọala.
Anyị mepụtara ọtụtụ ụdị dị iche iche nozzles, n'okpuru foto naanị maka ntụaka gị
Nke gara aga: Tungsten Carbide Disk maka Valve
Osote: Tungsten Carbide Wear Inserts na Harding na-eche ihe